Mohamed Salah Oo Ku Garaacay Xidigaha Sadio Mané Iyo Pierre-Emerick Aubameyang Abaal Marinta Xiddiga Sanadka Qaarada Afrika Ee 2017. – GOOL24.NET
Mohamed Salah Oo Ku Garaacay Xidigaha Sadio Mané Iyo Pierre-Emerick Aubameyang Abaal Marinta Xiddiga Sanadka Qaarada Afrika Ee 2017.
January 5, 2018 Cabdi Yare
Laacibka reer Egypt iyo kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa loo caleemo saaray abaalmarinta xiddiga sannadka qaarada Afrika ee 2017, isagoo noqonaya ciyaaryahankii labaad reer Masar ee taariikhda abaalmarinta ku guuleysta, kadib Mahmoud Al-Khatib oo horey weerarka kaga ciyaari jiray kooxda Al Ahly haatana ah madaxweynaha isla kooxdan.
Mohamed Salah ayaa wuxuu ku guuleysiga abaal marintan ku garaacay laacibka ay kawada tirsan yihiin kooxda Liverpool ee reer Senegale Sadio Mané iyo kan reer Gabon iyo kooxda Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.
Xidiga reer Egypt ayaa abaal marintan loo caleemo saaray kadib markii uu bandhig cajiib ah ka sameeyay iyo rikoodho muhiim ah kasoo sameeyay sanadii lasoo dhaafay ee 2017, hadii ay ahaan lahayd kooxdiisii hore ee Roma, tiisa haatan ee Liverpool iyo xulkiisa qaranka ee Masar.
Mohamed Salah ayaa wuxuu ciyaaray kulama gaaraya ilaa iyo 60 kulan, wuxuuna ku dhaliyay kulamadan 39 gool, sidoo kale wuxuu caawiye ka noqday 19 gool kale.
Guushan uu gaadhay Mohamed Salah ayaa waxay imaaneysaa kadib markii si xoogan loola xidhiidhinayay inuu gaadhi doono, sababa la xidhiidha guulihii uu la gaadhay xulkiisa Masar, kadib markii uu si weyn kaga caawiyay inay u gudbaan koobka aduunka ka dhici dalka Russia, waana tartan uu xulka Masar ka maqnaa mudo dhan 28 sano, wuxuu dhaliyay 5 gool, 8 kulan ee ah kulamada isreeb reebka koobka aduunka, xili sidoo kale uu caawiyay 2 gool kale.
Tababaraha xulka Masar ee reer Argantina Héctor Cúper ayaa sidoo kale la siiyay abaalmarinta macalinka sanadka ee qaarada Afrika, halka sidoo kale xulka Masar uu noqday xulkii ugu fiicnaa Africa sanadii 2017.